Home Wararka Maanta DEG DEG: Fahad Yaasiin & C/raxmaan dheere oo diyaarad gaar ah uraacay...
DEG DEG: Fahad Yaasiin & C/raxmaan dheere oo diyaarad gaar ah uraacay B/weyne
Badweytims ayaa ogaatay xogta ah in abaare 3-dii galabnimo uu diayarad gaar ah Muqdisho ka raacay lataliyaha Amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir isagoo ku wajahan Beled weyne oo doorasho berri ka dhaceyso.
Fahad waxaa safarkiisa ku wehlinaya dad kooban oo ay asxaab dhaw yihiin waxaana ku jira gacan yarihiisa gaarka ah Xildhibaan C/raxmaan Kulmiye Xersi (C/raxmaan Dheere).
Sawir la arkay maanta waxa uu ahaa mid garka uu soo xiirtay islamarkaana koofi ay ku qoran tahay nabad iyo nolol madaxa soo gishtay waana sawirkii labaad oo 48 saac ah laga helo xilli markii hore la diidi jiray.
Xogta la helay ayaa sheegeysa in Fahad uu caawa ku hoyan doono Teendho la diyaariyey oo ku dhex taalla garoonka diyaaradaha ugaas Khaliif Ee Magaalada Beled weyne,halkaasi oo amnigiisa ay sugayaan ciidanka duufaan iyo kuwo kale oo Nabad sugid ah.
Akhbaaraad aan helnay ayaa sheegeysa in kursiga sumadiisu tahay Hop#086 uu shahaadada murashaxnimo galabta qaadan doono,berrina uu si fudud ku guuleysan doono doorasho la qorsheeyey in garoonka lagu qabto.
Ergadii dooran laheyd ayuu hore ugu daabulay shalay Fahad Yaasiin Beled weyne iyo ciidankii ilaalin lahaa Amnigiisa,iyadoo ay socdaan qorshe Xafiiska R/wasaare Rooble damacsan yihiin oo ah in la joojiyo qabashada kursiga Fahad oo buuq dhinaca beesha reer Aw xasan ah kasoo yeereysa.
Fahad yaasiin ayaa ahaa shantii sano lasoo dhaafay ninka ugu saameynta badnaa Soomaalida,weliba isagoo codkiisa,muuqiisa ama sawirkiisa la arkin,waxa uu yahay shakhsiga go’aanka xukunka dalka loo daba fadhiisto,xitaa Madaxweyne Farmaajo ayuu ka saameyn badnaa.